Italiana ny vehivavy tokan-tena — Hihaona tokana vehivavy avy any Italia-ny
Izaho no tsara fanahy, ho tia mikarakara olona izay manana ny fanaovana zavatra tsara ho an’ny hafa. Aho hankafy ny fahafinaretana tsotra eo amin’ny fiainana ary izaho dia somary ambany fikojakojana ny olona. Tiako mitondra ny hafa amin’ny fomba aho, te-ho raisina ary mahatsapa aho namana ary e. Aho te hihaona ny vehivavy iray izay aho, dia afaka manomboka ny namana tsara tarehy ary raha ny fanapahan-kevitra roa, mba ho afaka ny endrika lehibe sy ny fifandraisana maharitra.
Izaho mino ny fahamarinan-toetra sy ny halako ny fihatsaram-belatsihy. Eto aho satria aho mitady ny tatsinanana vehivavy ho an’ny FIFANDRAISANA MATOTRA. tsy hifandray ahy raha tianao. Aho mitady mavitrika sy ny vehivavy sporty, mamy sy ny fikarakarana, ny ekilekitika ary marisika olona, tia ny novelties, iray izay tiany ny hahafantatra ny zava-baovao, mba handeha. Ny matanjaka sy tompon’andraikitra vehivavy izay hizara i eva. Ahy ny zava-misy sy ny zava-baovao lehilahy, ray be fitiavana, hifanaja, ary manohana namana iray, amin’ny Ankapobeny. Aho spurn ahy avy noho ny tahotra, ny fankahalana sy ny ahiahy. Izaho mino ny fahamarinan-toetra dia ny fomba tsara indrindra hamaritana ny olona, no tsy tonga lafatra nefa miezaka aho ny b. Izy tia ny Ranomasina, milomano, mahalala, na te-hianatra ny fomba ny sambo sy miara-miasa amiko ao amin’ny vanin-taona mafana fotoana. Izy no mendrika, misokatra tsaina, mora handeha mahafinaritra karazana. Tia Mifoha — ny farany ny aterineto matchmaking fanompoana mampiseho italiana ny vehivavy tokan-tena ho mampiaraka an-tserasera. Na ianao mitady namana vaovao na ny fitiavana ny fiainanao ianao dia azo antoka fa hahita manokana tokan-tena vehivavy na inona na inona karazana fifandraisana. Mba maka fotoana kely ny mijery maimaim-poana ny raki-tsary feno tsipiriany ny mombamomba azy ny ankizivavy iray avy any Italia. Mba tery ny fikarohana, ianao dia afaka mampiasa ny fandrosoan’ny fikarohana mba hahita ny vehivavy avy any an-tanàna rehetra, na fanjakana izay tsy tiany. Hamorona mombamomba ny tenanao ho maimaim-POANA, ary hanomboka fifandraisana hafa italiana vehivavy avy hatrany.
Mitady chat room
Ianao mahita azy ireo eto: Ankafizo ny fahafahana mifandray amin’ny tena-ny fotoana miaraka amin’ny hafa, ny Fitiavana mifohaza™ ny mpikambana ao amin’ny iray mahafinaritra sy mora-handeha tontolo iainana. Add voafetra ny isan’ny sary ny mombamomba izany maimaim-poana. Ny mpikambana ao amin’ny sary handray heny ny voka-pifidianana noho ireo mpikambana tsy misy, ka manao izany ho laharam-pahamehana.
Izy ireo efa nanao izany mora
Saram-monina ‘personals’ fotsiny dia tsy afaka mampitaha
← Ny Tsara indrindra amin'ny Firenena mba Hihaona ny Vehivavy